२०७१ माघ १७ गतेको प्रतीक दैनिक
२०७१ माघ १७ गतेको प्रतीक दैनिक पढ्न यहां क्लिक गर्नुहोस्
अस्पतालमा आन्दोलन, क्लिनिकमा कमाइ
प्रस, वीरगंज, १६ माघ/ विद्युत् सप्लाइ काटिएपछि आन्दोलित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका चिकित्सकहरूले आज पनि अस्पतालको सेवा ठप्प गरे । विद्युत् महसुल बक्यौता नतिरेको कारण माघ १३ गतेदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगंजले अस्पतालका अति आवश्यक शाखाबाहेक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीहरू बस्ने आवासीय क्षेत्रको विद्युत् सप्लाइ काटेको थियो । सोही विषयलाई बहाना बनाएर अस्पतालका चिकित्सकहरू बिहीवारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलित चिकित्सकहरूले शुक्रवार पनि अस्पतालको सेवा ठप्प गरे । उनीहरूले प्रसूति गृहमा रहेको शल्यक्रिया कक्षमा शुक्रवार पनि कुनै शल्यक्रिया गरेनन् । तर तिनै चिकित्सकहरूले निजी अस्पताल, क्लिनिकहरूमा भने रोगी परीक्षणदेखि शल्यक्रियालाई निरन्तरता दिए । अस्पतालमा भर्ना भएका शल्यक्रिया गराउनै पर्ने रोगीहरूलाई उनीहरूका आफन्तले अस्पतालकै चिकित्सकको सल्लाहमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा लगी शल्यक्रिया गराएका छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थामा शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सकहरू भने नाउक्षे अस्पतालकै थिए । चिकित्सकहरूले अस्पतालको सेवा ठप्प पारेपछि आज निजी स्वास्थ
शहीद दिवसको अवसरमा विविध कार्यक्रम
प्रस, वीरगंज, १६ माघ/ शहीद दिवसको अवसरमा आज नेपाली काङ्ग्रेस वीरगंज नगर कार्यसमितिले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल परिसरस्थित शहीद थीरबम मल्लको सालिकमा माल्यार्पण गरिएको थियो । यसैगरी अस्पतालका बिरामीहरूलाई फलफूल वितरण गर्नुका साथै आकस्मिक कक्ष र बाल बहिर· विभागका लागि नाडी जाँच्ने दुई थान उपकरण एवं नेबुलाइजर मेसिन प्रदान गरिएको थियो । नेका नगर कार्यसमितिले शहीद तेजबहादुर अमात्यको सालिकमा पनि माल्यार्पण गरेको थियो । सो अवसरमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै हबिब मियाँ, चन्द्रावती र अब्दुल करिमलाई प्रमुख अतिथि सभासद् राजेन्द्रबहादुर अमात्यले दोसल्ला ओढाइ सम्मान गरेका थिए । एमाओवादी र नेकपा–माओवादीद्वारा संयुक्त कार्यक्रम रामेश्वर मेहता, सिमौनगढ/ शहीद दिवसको अवसरमा एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा–माओवादीले सिम्रौनगढमा संयुक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् । सिम्रौनगढमा आयोजित कार्यक्रममा एमाओवादीका कामेश्वरप्रसाद कुशवाहा, मदन ठाकुर, नेकपा–माओवादीका श्यामकिशोर यादव, परमानन्द जयसवाललगायतले मन्तव्य व्य
नवदीप स्कूलको वार्षिकोत्सवमा खेलकुद
प्रस, वीरगंज, १६ माघ/ नवदीप एकेडेमीले दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा आज विद्यालय परिसरमा विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता गराइएको थियो । सो अवसरमा कपर्दी, फैन्सी ड्रेस, अरेन्ज, बनाना, थ्रीलेग र स्कीपिङ दौडको प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । प्रतियोगितामा विजयी विद्यार्थीहरूलाई प्रमुख अतिथि प्याब्सन पर्साका पूर्वअध्यक्ष इमामुद्दिन अहमद, माउन्ट एडमन्ड माविका प्रअ अनन्तकुमारलाल दास, बलिराम सिंह, अमिरीलाल गुप्ता, लालबहादुर महतो, डा. रामचन्द्र साहलगायतले प्रमाणपत्र तथा मेडल वितरण गरेका थिए । एकेडेमीका निर्देशक विनोद साहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सोनु साह र सुरेश यादवले सहजीकरण गरेका प्रधानाध्यापिका सुशीला साहले बताइन् ।
त्रलोक सिंह क्रिकेट: एन्जल र विद्यासदन सेमिफाइनलमा
प्रस, वीरगंज, १६ माघ/ त्रलोक सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज सम्पन्न खेलमा एन्जल इन्टरनेशनल र सगरमाथा स्कूल विजयी भएका छन् । पहिलो खेलमा एन्जल इन्टरनेशनलले डिपिएसलाई ७ विकेटले पराजित गरेको थियो । टस जितेर फिल्डिङ रोजेको एन्जलले डिपिएसलाई १८.२ ओभरमा १० विकेट खसाली ६९ रनमा सीमित गरेको थियो । एन्जलले उक्त लक्ष्यलाई १२.२ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्‍यो । सो खेलमा अविजित ३० रन बनाएका एन्जलका शाहबाज अन्सारी म्यान अफ द म्याच घोषित भए । त्यस्तै आज भएको दोस्रो खेलमा सगरमाथाले मास्कोटलाई २१ रनअन्तरले पराजित गर्‍यो । टस जिती पहिले ब्याटिङ गरेको सगरमाथाले निर्धारित २० ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १२४ रन बनाएको थियो । प्रतिउत्तरमा मास्कोटले २० ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १०३ रनमात्र बनाउन सक्यो । २१ रन बनाएका सगरमाथाका शाहबुद्दिन अन्सारी म्यान अफ द म्याच घोषित भए । शनिवार पहिलो सेमिफाइनल खेल गौतम मावि र विद्यासदन माविबीच हुनेछ भने दोस्रो सेमिफाइनल खेल एन्जल र सगरमाथा माविबीच हुनेछ ।
यमुना प्रधानाङ्ग ‘मुना’ साँझ पनि झमक्कै परिसक्यो, कति चाँडै रात पर्छ भने ? छोटो दिनमा त केही गर्नै भ्याउँदैन । खाना पकाउन पनि ढिलो भइसक्यो । के पकाउँ ? अहिले छोरो आयो भने भोक लाग्यो भनेर थाल ठटाउन थाल्छ । छिटोछरितो पनि हुने, आफ्नो पेट पनि ग्याँसले गर्दा भारी भएको छ । आ... खिचडी पकाउँछु । आफ्नो पेटको अवस्था हेरेर बनाउँछु त भनें, छोरा, पतिदेव, देवरले खाने हुन् कि होइनन् ? छोरोले नखाए भने भोकभोकै सुत्छ । छोरोको लागि अरू पनि केही खानेकुरा फ्रिजमा छँदैछ, नखाए भने, त्यही दिउँला । पतिदेवलाई पनि खिचडी मन परिहाल्छ । झन् अलिकता घ्यू, मासको दाल राखी पकाएको हुनुपर्छ, मीठो मानेर खानुहुन्छ । तर आज उनको मुड कस्तो छ ? अलि झोकी मान्छे ? अचेल प्रेसर पनि बढेको छ । झोकिन्छन् कि भन्ने डर पनि लाग्छ । देवरले त खाइहाल्नुहुन्छ होला । खिचडी नै बनाउँछु । कहिलेकाहीं त पेट हलुका पनि राख्नुपर्छ । भनिन्छ, हप्तामा एक दिन पेट खाली राख्यो भने स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ । पेट खाली राख्न नसके तापनि राति चाहिं हल्का खाना खायो भने स्वस्थ होइन्छ रे भन्छन् । अहिले त चिनी, ग्यास्ट्रिक, प्रेसर नभएको मानिस नै छैन
दशकको हाासो !
सञ्जय साह ‘मित्र’ अहिले मुलुकमाथि देशी–विदेशीहरूले निकै चाखलाग्दो हाँसो हाँसेको अवस्था छ । ऐतिहासिक भनिएको दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात्को सबैभन्दा ठूलो प्रतीक्षाको दिनको रूपमा रहेको माघ ८ को अत्यन्त सहज अवसान भनूँ कि व्यङ्ग्यात्मकरूपमा होला भनेर कसैले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । अहिले नेपाली हाँसोको पात्र बनेका छन् भन्ने लागेको छ । केही दिनअघि एक ठाउँमा रमाइलो भेटघाटको वातावरण थियो । रौतहटको नुनथरलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न थालिएको छ । त्यहाँ मधेसका विभिन्न जिल्ला र भारतबाट समेत पिकनिक खान मानिसहरूको ओइरो लाग्न थालेको छ । अलिअलि पानी परेको दिन थियो । दिनरात एकै किसिमको जाडो हुने मौसममा पानी परेपछि जाडोको जवानीमा होली त हुने नै भयो । त्यसै पनि पिउनेहरूलाई हरेक मौसमले चुनौती दिइरहेको हुन्छ । पिउँदै नपिउने, कहिलेकाहीं पिउने, कसैले बलजफ्ती गरेपछि अलिअलि पिउने र जतिसुकै धेरै पाए पनि पिउन चाहिं नछोड्ने गरी हामी सबै किसिमका व्यक्ति थियौं, त्यस भेटघाटको दिन । भएको के थियो भने एक दिन गफैगफमा जाडोलाई चुनौती दिन नुनथर पहाड जान एकजना मित्रले आफ्नो बसलाई निश्शुल्क उपलब्ध गराइदिए । बस
चन्द्रकिशोर जनक, सीता र बुद्धलगायतलाई राष्ट्रिय विभूति मानियो तर उनीहरूको थलोको इतिहासलाई विलोपीकरण गरियो । यहाँनिर दुईथरीका गुनासाहरू देखिन्छन् । एउटाले नेपाली इतिहास केवल विजेताहरूको इतिहास भएको दाबी गर्छन् किनभने इतिहासका नाममा काठमाडौंको सत्तामा उक्लेकाहरू तथा स्वयम् काठमाडौं खाल्डोलाई नै पारम्परिक नेपाल राज्यको मूल थलो मान्दै त्यसैको केन्द्रीय तत्त्वमा इतिहास अल्झिरहेको भन्छ । दोस्रो मतले गोर्खा राज्यको विस्तार भएपश्चात् प्रतिरोधको इतिहासलाई ओझेलमा पारिएको गुनासो पोख्छन् । ती मान्यता राख्नेहरूका दृष्टिमा खासगरी चुरेभन्दा दक्षिणको मैदानी भूभागको इतिहासलाई नेपाली मूलधारको इतिहासलेखनले यथोचित “स्पेस” नदिएको आक्षेप छ । गोर्खा राज्य विस्तार जसलाई नेपालको भौगोलिक एकीकरण भएको मान्यता राख्नेहरूसमेत ठूलो सङ्ख्यामा छन् । त्यो भौगोलिक एकीकरणपश्चात् जोडिन पुगेको भूभागको इतिहासलाई ‘ब्लैक आउट’ गरियो, जसले उनीहरूको संस्कृतिमाथि प्रतिघात गर्न सकियोस् भनेर यतिखेर पुनव्र्याख्या हुन थालेको छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न तथा राष्ट्रिय एकताका नयाँ सूत्रहरू खोजी गर्ने क्रममा नेपाली इतिहासलेखनका बारेमा
कास रोग र आयुर्वेद उपचार
डा. रमेश मिश्र कास श्वसनवह संस्थानको विकृतिको कारण श्लेष्मायुक्त अथवा श्लेष्मारहित उर: प्रदेशमा शूलको साथ उत्पन्न हुन्छ । यसलाई नै कास अर्थात् खोकी भनिन्छ । आयुर्वेद अनुसार जब प्राणवायु उदानवायुको साथमा मिलेर वेगको साथ कण्ठबाट बाहिर निस्किन्छ, तब घाँटीमा खराबीबाट रुघाखोकी हुन्छ वा खर खर भएर कास हुन्छ । कहिले सुक्खा आवाज भएको खोकी हुन्छ त कहिले कफ भएको खोकी हुन्छ । कास अर्थात् खोकी पहिले उत्पन्न कुनै रोगको कारणले हुँदैन भने त्यस्तो कासलाई स्वतन्त्र भनिन्छ । त्यस्तै पहिले कुनै रोगको कारण खोकी लागिरहन्छ भने त्यस्तो कासलाई परतन्त्र भनिन्छ र यो कुनै न कुनै रोगको लक्षणको रूपमा हुन्छ । आयुर्वेद अनुसार २३ प्रकारका रोगहरूको लक्षणको रूपमा कास अर्थात् खोकीलाई मानिन्छ । भनाइ पनि छ, जसरी हाँसीहाँसी झगडा बढेर मारपिट हुन्छ, त्यस्तै कास अर्थात् खोकीको रोकथाम गरिएन भने यो बढेर दम, बाडुली, शोष राजयक्षमा, उरक्षत, रक्तपित जस्ता रोग उत्पन्न हुन्छन् । बढी धुवाँ, धूलो भएको ठाउँमा बास गर्नु, बढी रूक्ष अन्न वा पेय पदार्थको सेवन गर्नु । शक्तिभन्दा बढी काम गर्नु, हाछ्यूँको वेगलाई रोक्नु, मलमूत्रको
सरस्वतीपूजामा परिमार्जन आवश्यक: अन्धविश्वास कहिलेसम्म ?
वैद्यनाथ ठाकुर हिन्दू धर्ममा ज्ञानकी देवी भनेर सरस्वतीलाई मानिन्छ । सरस्वतीपूजाको दिन बालबालिकाहरूको नामाकरण गर्ने, अक्षर चिनाउने तथा कलम समात्न लगाउने प्रचलन पनि चल्दै आएको छ । बसन्त पञ्चमीको दिन नेपालीहरूले श्रीपञ्चमी अर्थात् सरस्वतीपूजा मनाउने गर्दछन् । सरस्वतीपूजाको दिनदेखि बसन्त ऋतुको आगमन हुन्छ भन्ने विश्वासको आधारमा यस दिनलाई बसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ । झन् नेपाली समाजमा विगतमा राजा महाराजाहरू र यति बेला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले बसन्त श्रवण गर्ने पनि प्रचलन रहिआएको छ । सरस्वती मातालाई खुशी पार्न विद्यार्थीहरूले शैक्षिक प्रतिष्ठानमा माटाका मूर्ति बनाएर पूजा गर्ने, भजन कीर्तन गर्ने, रातभर जाग्राम बस्ने र भोलिपल्ट नदी, तलाउ वा पोखरीमा सेलाउने प्रचलन पनि निकै पुरानो छ । पहिले पहिले सरस्वतीपूजा विद्यालय, महाविद्यालयहरूमा मात्र हुने गरेको भएपनि यति बेला पूजासँगै थुप्रै विकृतिसमेत सरस्वती पूजाको नाममा संस्थागत भइसकेको छ । गैरशैक्षिक प्रतिष्ठानहरू वा गाउँटोलमा केही केटाहरू मिलेर चन्दा उठाउने र पूजा गर्ने परिपाटी पनि बढेको छ । आजभोलि सरस्वती माताको माटोको मूर्तिको भाउ पनि पहिलेको
बर्थिङ सेन्टरमा पुगेर पनि प्रसूति सेवा नपाई ज्यान गुमाएकी गीतादेवी रौनियारको सम्बन्धमा छानबिन तथा अनुसन्धानका लागि मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय जनस्वास्थ्य कार्यालयले चासो देखाएको छ । छानबिन टोलीका सदस्यहरूले मृतकको घरपरिवारसँग सत्यतथ्य बुझ्नुका साथै दोषीमाथि कारबाई गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विपन्न परिवार तथा ग्रामीण बासिन्दा गीतादेवीका परिवारजनले घटना सम्बन्धमा कुनै आन्दोलन, हडताल वा बाधा विरोध गरेका छैनन् । अरू केही नभए पनि गाउँमा रहेको स्वास्थ्य केन्द्र घेराउ वा आरोपित स्वास्थ्यकर्मीविरुद्ध प्रदर्शन गर्न सकिन्थ्यो, तर रौनियार परिवारले सञ्चारकर्मीसँग आफ्नो व्यथा पोख्नुबाहेक केही गरेन । सोझा, निर्धा र दूरदराजका बासिन्दाका लागि पीडा पोख्न पनि गार्‍हो छ । पीडक पक्ष सञ्जाल बलियो बनाएर बसेका हुन्छन् । उपस्वास्थ्य चौकीमा काम गर्नेहरू गाउँमा डाक्टर साहेब कहलाइने हुँदा उनीहरू समाजका प्रतिष्ठित कोटीमा पर्छन् । गाउँबाट सदरमुकाममा आएर हल्लीखल्ली गर्ने पीडितको हैसियत हुँदैन । अधिकारवादी सङ्घसंस्थाहरू त झन् अपवादबाहेक शहरकेन्द्रित प्रतिवेदन र प्रचारमा मात्र सीमित छन् । यो अवस्थामा आवाजविहीनहरूक
२०७१ माघ १६ गतेको प्रतीक दैनिक
२०७१ माघ १६ गतेको प्रतीक दैनिक पढ्न यहां क्लिक गर्नुहोस्
नाउक्षे अस्पतालमा विद्युत् सप्लाइ काटिएपछि चिकित्सकद्वारा अस्पतालको सेवा अवरुद्ध
प्रस, वीरगंज, १५ माघ/ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वीरगंज वितरण केन्द्रले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको विद्युत् सप्लाइ काटेपछि आजदेखि अस्पतालका चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन् । ९२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता देखिएपछि प्राधिकरणले अस्पतालको विद्युत् सप्लाइ काटेको हो । “प्राधिकरणले बक्यौतामध्ये ४० प्रतिशत भुक्तानी गरेको खण्डमा विद्युत् सप्लाइ सुचारु गर्ने बताएको छ, तर अस्पतालसँग १० लाख रुपैयाँ मात्रै भएकोले विद्युत् सप्लाइ सुचारु हुन सकेको छैन”, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रामशड्ढर ठाकुरले भने । मेसु ठाकुरले सो रकम प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्न खोज्दा प्राधिकरणले सो प्रावधान देखाएको र मन्त्रालयबाट लिखितपत्र ल्याउन सुझाएकोले विद्युत् सुचारु हुन नसकेको बताए । प्राधिकरणले विद्युत् सप्लाइ काटेपछि माघ १३ गतेदेखि अस्पतालको आकस्मिक, प्रसूति गृहमा रहेको सर्जिकल, बाल बहिर· शाखा, आईसीयु, अपरेसन थिएटरबाहेकका सबै स्थानका विद्युत् सप्लाइ अवरुद्ध भएको छ । अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी विद्युत् अभावमा समस्याग्रस्त भएकाले बिहीवारदेखि आकस्मिक सेवाबाहेकका सबै सेवाहरू ठप्प
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता शुरू
प्रस, वीरगंज, १५ माघ/ वीरगंजमा आजदेखि राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता शुरू भएको छ । नारायणी र·शालामा आज एक समारोहबीच नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साका सचिव कृष्णउदास खनालले प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका थिए। सो अवसरमा सचिव खनालले यस्ता प्रतियोगिताको आयोजनाले खेलकुद क्षेत्रको विकास हुने बताए । जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष अमिताभ बच्चन दासको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन सत्रमा फूटबल प्रशिक्षक हरिबहादुर श्रेष्ठ, एथलेटिक प्रशिक्षक अमिरी यादवलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन प्रभाकर गुप्ताले गरेका थिए ।
मोबाइलबाट एसएमएस र कल गरी ठगी गर्ने एकजना नेपाली र तीनजना भारतीय पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १५ माघ/ मोबाइल फोनमा एसएमएस पठाइ एवं कल गरी मानिसहरूलाई नगद, जिन्सी उपहार परेको भनी सोको करबापतको रकम बैंकमा दाखिला गराउन लगाएर ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न एकजना नेपालीसहित तीनजना भारतीयलाई पर्सा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । आज पत्रकार सम्मेलन गरी जिप्रका पर्साले ठगी आरोपमा पक्राउ परेका भारतको विहार राज्यको सिवान निवासी नीरज माझी, गोपालगंज निवासी रियाज अली र पथरा निवासी इमान अली तथा बारा जिल्ला गाविस लिपनीबिर्ता निवासी छोटेलाल सहनीलाई आज सार्वजनिक गरेको थियो । मोबाइल फोनमा एसएमएस र कल गरी उपहार परेको जानकारी दिने र सो उपहारप्राप्तिको लागि १० प्रतिशत रकम बैंक दाखिला गर्न लगाउने तर सो उपहार उपलब्ध नभएपछि ठगिएका व्यक्तिहरूले लिखित उजुरी दिएपछि सो ठगीको अनुसन्धान गर्दा एकजना नेपाली र तीनजना भारतीय पक्राउ परेका जिप्रका पर्साले जनाएको छ । घटना सम्बन्धमा थप व्यक्तिहरूको संलग्नता भएकाले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान जारी रहेको पनि जिप्रका पर्साले बताएको छ । पक्राउ परेकाहरूबाट विभिन्न बैंकका २० वटा एटिएम कार्ड र १२ थान सिमकार्ड फेला परेको प्रहरीले बताएको छ । ठगी सम्बन्धमा
क्युबाको बदलिंदो अर्थव्यवस्था र कम्युनिज्मको भविष्य
विश्वराज अधिकारी कम्युनिज्म एक सुखद सपनाजस्तो हो जुन आँखा बन्द रहेसम्म एकदम आनन्ददायी लाग्छ तर आँखा खुलेपछि केवल भ्रम मात्र बाँकी रहन्छ । यथार्थमा वरपर केही पनि हुँदैन । कम्युनिज्म आएपछि देशमा यस्तो विकास हुन्छ, उस्तो विकास हुन्छ, देशबाट गरिबी अन्त्य हुन्छ, गरिबहरूको आर्थिक जीवन सहज मात्र हुँदैन, राज्यको शासन व्यवस्थामा उनीहरूको सक्रिय भूमिकासमेत स्थापित हुन्छ । कम्युनिज्ममा यस किसिमका सपनाहरू बाँडिएका हुन्छन् । तर कम्युनिज्म आएपछि देशको आर्थिक विकासको गति सुस्त मात्र हुँदैन उल्टो गरिबहरूको आर्थिक जीवन झनै कष्टकर भएर जान्छ । देशमा स्थापित कम्युनिस्ट अर्थ व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी गरिब नागरिक पीडित हुन पुग्दछ । व्यवहारले यही देखाएको छ। र यो सबैले देखेको कुरा हो । विश्वका अनेक राष्ट्रको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्ने हो भने यो कुरा प्रस्ट हुन आउँछ । विडम्बना १ गरिबहरूको सर्वाेत्तम हित गर्ने व्यवस्थाको रूपमा प्रस्तुत र अनुभूत गरिएको कम्युनिज्मले गरिबहरूको आर्थिक जीवनलाई थप कष्टकर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कम्युनिज्मले उल्टो बरु देशका केही गिनेचुनेका व्यक्तिहरूलाई फाइदा दि
सक्रिय जनसङ्ख्याको उपयोग र समृद्धि
शीतल महतो नेपाली जनसङ्ख्याको हालको उमेरगत संरचनालाई विश्लेषण गर्दा १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाको तुलनामा उत्पादनशील उमेर समूहका जनसङ्ख्याको आकार वृद्धि हुँदै गइरहेको पाइन्छ । अर्थात् नेपालमा अहिले १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका सक्रिय जनसङ्ख्या अत्यधिक रहेको देखिन्छ । कुल जनसङ्ख्याको ५७ प्रतिशत सक्रिय अर्थात् कमाउन सक्ने उमेर समूहका छन् । यो मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर हो । किनभने अघिल्ला दशकहरूमा १५ वर्षमुनिका अनुपात उच्च हुने गर्दथ्यो तर अहिले श्रमशील उमेर समूहमा पनि १५ वर्षदेखि ३० वर्ष उमेर समूहको बाहुल्यता बढ्दै गएको पाइन्छ । यो उमेर समूहले आफ्नो परिवार, समाज र राष्ट्रसँग क्षमता अभिवृद्धिका लागि शिक्षा, सीप विकास, स्वास्थ्यमा यथेष्ट लगानी र उत्पादनमुखी रोजगारीको उचित वातावरणको अपेक्षा गरेको हुन्छ । यदि यो उमेर समूहले आफ्नो व्यक्तिगत उन्नयनका लागि उचित लगानी र अवसर पाएको खण्डमा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थालाई माथि उकास्न सक्छ । यसतर्फ राज्यले समयमैं संवेदनशील र चनाखो भएन भने उल्टै यो समूह आन्तरिक द्वन्द्व, अस्थिरता र अरा
सङ्घीयतामा सन्तुलित आर्थिक अधिकार
वीरेन्द्र यादव बहुलवाद र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा एवं जनताको व्यापक सहभागिताद्वारा समस्या समाधानको निम्ति सरकारको सङ्घीय स्वरूप उचित मानिए पनि सङ्घ र प्रान्तबीच शक्ति सन्तुलन गर्न सकिएन भने आन्तरीक द्वन्द्वले सङ्घ विघटन हुनुका साथै राष्ट्र विखण्डन हुने, असफल राष्ट्रमा परिणत हुने, गृहयुद्धमा फस्ने लगायत दुर्घटना उत्पन्न हुने गरेको छ । त्यसमा पनि शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिकरूपले पछाडि परेको नागरिकको सङ्ख्या बढी भएको देशमा यस्तो जोखिम बढी हुन्छ । पहिलोपटक सङ्घीयतामा जाँदा स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रतालाइ सदुपयोग गर्ने अनुभवको कमीले पनि दुर्घटना निम्तिने गरेको छ । शक्ति बाँडफाँडको सन्दर्भमा बढी विवाद हुने सम्भावना पनि रहने गर्दछ । शक्ति असन्तुलनको कारण विघटित भएका राष्ट्रहरू नाइजेरिया, रोडेसिया र न्यासा ल्यान्डको सङ्घमध्ये अमेरिकाको संयुक्त प्रान्त र वेस्टइडिन्ज सङ्घलाई लिन सकिन्छ । सन् १९६३ देखि नाइजेरिया सङ्घमा रहेका विभिन्न प्रान्तहरू टुक्रिएका छन् भने रोडेसिया उत्तर र दक्षिणमा विभाजित भई जाम्बिया र जिम्बाब्वे बनेको छ । र न्यासाल्यान्ड मालावी भयो । त्यसैगरी मध्य अमेरिकी
संविधानसभामा रुमलिएको देश
ई. गोपाल श्रेष्ठ ‘संविधान’ देशको सबै राजनीतिक दलबीच हुने सम्झौताको एक दस्तावेज हो । संविधान कुनै एक पक्षको मात्र दस्तावेज होइन र हुनु पनि हुँदैन । यसले देशलाई सही नीति–नियम, ऐन–कानुन मुताबिक हरेक विकास निर्माण तथा अन्य कार्यको लागि मुलुकलाई सही ढ·ले कार्य व्यवस्थापन गर्न सही मार्गदर्शन दिन्छ । त्यही संविधान निर्माण गर्न हाम्रो देश यति बेला संविधानसभामा रुमलिएको छ । हामीलाई अहिले यस्तो लागिरहेछ कि भोलि हामीले संविधान पाउने बित्तिकै देशमा कायापलट हुनेछ । तर यो कदापि सत्य भने होइन । संविधान नै नभएको देश बेलायत, इजरायल आज कुनै पनि सभ्य र विकसित मुलुकभन्दा कम छैन । हामी संसारको दरिद्र देश, अनाहकमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नै खर्च गरी संविधान बनाउने तरखरमा लागिरहेका छौं । यो ५० अर्ब रुपैयाँले त अनेकौं विकास निर्माणका काम हुन सक्थे, जसले साधारण नेपालीका जीवनस्तर सुधार गर्न प्रशस्त सहयोग गर्न सक्थ्यो । बीबीसी नेपाली सेवाका सञ्जय ढकालको विश्लेषण अनुसार यो ५० अर्ब रुपैयाँले कोटेश्वर–भक्तपुर जोड्ने ६ लेनस्तरको करिब २०० कि.मी. लामो सडक निर्माण हुन सक्थ्यो । यो लम्बाइले काठमाडौं–पोखरा जोड्न स
श्रीमन्नारायण मिश्र देशका शीर्षस्थ राजनीतिज्ञहरूको अदूरदर्शिता एवं अपरिपक्वताका कारण पूर्वघोषित मितिमा संविधान जारी हुन सकेन । सत्ताधारीहरूले बहुमतको आधारमा भएपनि संविधान जारी गर्ने उद्घोष गर्नु तथा प्रतिपक्षीहरूले सहमतीय संविधानको निर्माण नहुन्जेलसम्म नयाँ संविधानलाई जारी गर्न नदिने आफ्नो अडानमा डटेका थिए । अन्तत: संविधान आउन सकेन । संविधान जारी हुन नसक्नु कुनै ठूलो कुरा होइन तर यसले गम्भीर नैतिक सड्ढट अवश्य पनि उत्पन्न गरेको छ । सत्ताधारी राजनीतिक दलहरू स्वयम् पनि संविधान जारी गर्ने विषयमा एकमत थिएनन् । सत्ताधारी गठबन्धनका दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस एवं नेकपा एमालेका निम्ति सरकारको नेतृत्व नै अर्जुनदृष्टि थियो । जस्तोसुकै भएपनि तथा जसरी भएपनि संविधान जारी गर्ने एमालेको अडानका कारण पनि संविधान निर्माण कार्य पूरा हुन सकेन । भदौ महिनामा नै संविधान निर्माणको प्रक्रिया शुरू भएको भए मात्रै ८ माघमा यो जारी हुन सक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । नेपाली काङ्ग्रेस यस कारण बढी संवेदनशील थिएन कि संविधानको निर्माण भएपछि उसले सरकारको नेतृत्व छोड्नुपर्दथ्यो । तर नेपाली काङ्ग्रेस एवं नेकपा एमाल
हद अर्थात् सीमा नभएको कुनै चीज छ भने त्यसले अवश्य नै विनाश निम्त्याउँछ । विश्वमा सबैभन्दा अग्लो मानिएका टर्किस नागरिक सुल्तान कोसेन बैसाखी वा अरूको सहाराबिना हिंड्न सक्दैनन् । ८ फिट ३ इन्च लामो उसको शरीर ठडिन गाह्रो छ । कोसेनको जस्तो उचाइ सामान्य मानिसको उचाइको हदभन्दा बढी हो । त्यसैगरी हदभन्दा बढी मोटा मानिसहरूको जीवन अत्यन्तै भयावह हुन्छ । अग्लो र मोटो बन्ने रहर अधिकांश मानिसमा हुन्छ । तर त्यही कुराले हद नाघ्दा अभिशाप भइदिन्छ । चिनी धेरै खाँदा तीतो हुन्छ, घ्यु धेरै भयो भने पखाला चल्छ । स·ीतको आवाज सीमा नाघ्दा कोलाहलमा परिणत हुन्छ । प्राकृतिक होस् वा कृत्रिम कुनै पनि वस्तुले हद पार गर्दा सकारात्मक परिणाम दिंदैन । मन्द–मन्द बहने शीतल हावाले ठूलो रूप लिंदा हुरी आउँछ । ठीक तरिकाले शरीर देखाएका मानिस सुन्दर देखिन्छ भने त्यही मानिस सर्वा·ै हुँदा लाजमर्दो देखिन्छ । घरपरिवार, समाज र राज्य सञ्चालनमा पनि हद अर्थात् सीमा लागू हुन्छ । सीमा बाहिर गएमा अराजकता, अनुशासनहीनता बढ्ने गर्छ । भारत सरकारले मुम्बई नगरस्थित रेल स्टेसनमा भीख माग्ने भिखारीहरूलाई पक्राउ गरी दण्ड जरिवाना गर्दा भारु ७०
२०७१ माघ १५ गतेको प्रतीक दैनिक
२०७१ माघ १५ गतेको प्रतीक दैनिक पढ्न यहां क्लिक गर्नुहोस्
हरपुर गाविसमा स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीबीच दोहोरो भीडन्त, ४ प्रहरीसहित आधादर्जन गाउँले घाइते, हात्तिको दातसहित चौधरी पक्राउ
प्रमोद यादव, रङगपुर १४ माघ/ पर्साको हरपुर गाविसमा सिआइबी काठमाडौंको टोलीले स्थानीय सरजुग चौधरीलाई हात्तीको दाँतसहित पक्राउ गरेपछि निजको पक्राउको विरोधमा स्थानीय बासिन्दा अगाडि आएपछि भएको दोहोरो भीडन्तमा चारजना प्रहरी र आधा दर्जन गाउँले घाइते भएका छन् । आज साँझ सिआइबी प्रनि भोला भट्टको नेतृत्वमा पाँचजना प्रहरी सम्मिलित टोलीले चौधरीको घरमा छापामारी गरी हात्तीको दाँत फेला पारेपछि चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि सोको विरोधमा गाउँलेहरूले सिआइबी टोलीलाई घेरा हाली गाउँबाट निस्कन दिएका थिएनन् । गाउँलेहरूले घेरामा लिएको सूचना प्रवाह भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय, पटेर्वा सुगौली र प्रहरी चौकी बिरुवागुठीको टोली घटनास्थल पुगेको थियो । थप प्रहरी टोली पुगेपछि गाउँलेहरूले ढुङ्गामुढा गरेका थिए । अधिकांश महिला र वृद्धवृद्धा सम्मिलित गाउँलेहरूको ढुङ्गामुढाबाट सिआइबीको गाडीको शीशा फुटेको थियो । पछि घटनास्थलमा इप्रका सिमरा, मनवा, परवानीपुर, एकटाँगा, रङपुर टाँडी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साबाट टोली पुगेको थियो । गाउँलेहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेको कार
सिम्रौनगढ नगरको बजेट २ करोड
रामेश्वर मेहता, सिम्रौनगढ, १४ माघ/ सिम्रौनगढ नगरपालिकाको प्रथम नगरपरिषद् कड्ढाली उच्च मावि प्रा·णमा आज सम्पन्न भयो । परिषद्मा नगरका कार्यकारी अधिकृत सीताराम साहले आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ को लागि रु २ करोड १९ लाख ८५ हजार ९९३ अनुमानित वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत बजेटमा आन्तरिकतर्फ रु ३१ लाख ५५ हजार, चालूतर्फ रु १५ लाख ८२ हजार, पूँजीगत अनुदानतर्फ रु ५४ लाख र धरौटीबाहेक एलसिडिपीसमेतको मौज्दात रु २३ लाख ७५ हजार ५९३ रहेको छ । त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा रु ८१ लाख ३३ हजार र बालपोषण भत्तातर्फ रु ७ लाख २४ हजार ८ सय रहेको कार्यकारी अधिकृत साहले सार्वजनिक गरे । परिषद् उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका मुख्य अतिथि जिविस बाराका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी उमेशकुमार रेग्मीले जनजागरुकता नै विकासको मूल आधार भएको बताए । उनले सिम्रौनगढ नगर बनेपछि अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताउँदै उक्त धार्मिक पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक क्षेत्रको विकास एवं संरक्षणका लागि चेतना, शिक्षा र जनसहभागिता खाँचो रहेको औंल्याए । स्थानीय विकास कर्मचारीका लागि नभई स्थानीय बासिन्दाको ला
समग्र बैंकिङ व्यवसाय प्रवद्र्धनमा ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापनको महत्त्व
–सूरज श्रीवास्तव आजको प्रतिस्पर्धी पेशागत बैंक तथा वित्तीय व्यवसाय अनिवार्य, ज्यादै आकर्षक र लोकप्रिय बन्न पुगेको सर्वविदित नै छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले जनमानसको अभिन्न अ· बनेर समाजको ठूलो सहभागिता प्राप्त गरिरहेको छ । दैनिक जीवन निर्वाह, व्यापार र उद्योग सञ्चालन, अनुसन्धान एवं यन्त्रीकरणका साथै देशका महत्त्वाकाङ्क्षी आयोजनाहरू ज्स्तै हाइड्रोपावर, जलस्रोत विकाससम्म बैंक तथा वित्तीय व्यवसायको निकटता रहेको पाइन्छ । हामीलाई थाहा छ जुनसुकै व्यक्ति, संस्था वा व्यावसायिक क्षेत्रलाई क्रियाशील बनाउन जनस्तरमा परिचित गराउनुपर्छ । यसरी जनस्तरमा परिचित गराउँदा यसको महत्त्व पनि प्रस्ट पार्नुपर्छ । अर्थात् जब व्यवसाय वा कारोबार जनस्तरमा अपरिहार्य र आवश्यक पूर्तिको माध्यम बन्न पुग्छ तब मात्र यसभित्रका क्षमता र दीर्घ आधारहरू स्पष्ट बन्दै जान्छन् । ठीक सोही अनुरूप बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि प्रमुख आधार स्तम्भको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यस्तो नेपाली हुर्कंदो परिवेशलाई दृष्टिगत गरी यो पेशा अँगाल्न एवं यसको सान्निध्य प्राप्त ग
नेपाली युवाको सपना र मोदीको विचार
सञ्जय साह ‘मित्र’ अहिलेका अधिकांश युवालाई सामान्य प्रश्न गर्दा उत्तर स्पष्ट आउँदैन । युवाहरू विस्तारै परिचयहीन बन्दैछन् । जहाँ सपना देखिन्छ, त्यहाँबाट केही गर्ने चाहना उम्रिन्छ भनेर पहिले भनिन्थ्यो तर विस्तारै अहिले सपनाको अर्थ नै बुझ्न छाडेको हो कि भन्ने भान ग्रामीण युवाहरूबाट पर्न थालेको छ । अझै पनि युवाहरूले आफूले ठूलो सपना देखेको कुरा गर्छन् तर काम भने त्यसको विपरीतलाई समेत नसुहाउने गर्छन् । अहिलेकै उदाहरण लिन सकिन्छ । सरस्वती पूजामा विद्यार्थीहरू उच्छृङ्खल बनेका छन् । कतिसम्म देखियो भने सरस्वतीको मूर्ति खोलामा सेलाउन गएका विद्यार्थीहरू बियरको बोतल लिएर नाचिरहेका छन् । चुरोटको धूवाँ बुङ्बुङ्ती उडाइरहेका छन् । अश्लील गीतमा अश्लील नृत्य गरिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा सरस्वती पूजाको लागि उठाइएको चन्दामा विद्यार्थीहरूले हिनामिना गरेर विवाद भएको पनि सुनियो । यथार्थमा विद्यार्थीको चरित्रसित अलिकति पनि नसुहाउने यस किसिमका कार्यहरूले उनीहरूको बाटो कता गइरहेको छ भन्नेतर्फ सोच्न हामीलाई बाध्य पारेको छ । पूरा समाज नै बिग्रिसक्यो भन्न खोजेको होइन । तर समाजका धेरै मान्यताहरू यसरी विघटन भ